कोरोना पुष्टि भएपछि पनि सँगै सुते ३९ जना, संक्रमित व्यक्ति पत्ता लगाउन २ दिन — Motivatenews.Com
कोरोना पुष्टि भएपछि पनि सँगै सुते ३९ जना, संक्रमित व्यक्ति पत्ता लगाउन २ दिन
सुर्खेत – दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ सात्तालाका ३५ वर्षीया एक युवामा कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएको सोमवार बिहान ८ बजे खबर सार्वजनिक भयो ।
जेठ १ गते स्थानीय लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्थामा गत शनिवार प्रदेश सरकारको पहलमा सबै ३९ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो । स्वाब स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा ल्याएर पीसीआर विधिमार्फत जाँच गरे । ३९ जनामध्ये १ जनाको रिपोर्ट ‘पोजेटिभ’ आयो ।
कोरोना पोजेटिभ आएको हल्ला गाउँमा गएपनि कुन व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ भन्ने कुरा २ दिनसम्म पनि कसैलाई थाहा भएन । स्वास्थ्य चौकी सात्तालाका प्रमुख ध्रुवराज विष्टका अनुसार मंगलबार बेल
का मात्र संक्रमितको पहिचान भएको बताए ।
‘सोमवार बिहान ८ बजे एक जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको खबर आएको थियो,’ उनले भने, ‘कुन व्यक्तिमा कोरोना देखिएको हो थाहा थिएन ।’ उनका अनुसार ती सबै व्यक्ति हिजोअस्ती जस्तै सँगै क्वारेन्टाईनमा बसेका थिए । कोरोना संक्रमित भएको पत्ता लागेपनि उनीहरू एकैसाथ बसिरहेका थिए, कसलाई कोरोना संक्रमण भएको हो अत्तोपत्तो नभएपछि यस्तो भएको हो । संक्रमित व्यक्तिको नाम समयमै क्वारेन्टाइनलाई जानकारी नदिँदा अन्य व्यक्तिलाई पनि कोरोना सर्ने सम्भावना बढेको उनले बताए ।
‘कुन व्यक्तिमा कोरोना देखिएको हो ? हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘थाहा नभएपछि कसलाई अलग गराउने ? उनीहरू सबै रातिसँगै सुतेका छन् ।’
स्रोतका अनुसार ३५ दिन वनवासामा क्वारेन्टाइनमा बसेका, बसमा सँगै आएका भनेर क्वारेन्टाइनमा बसेका अन्य युवाले लापरवाही गरिरहेका थिए । ‘हरेक राति उहाँहरू देउडा खेल्नुहुन्थ्यो । घरबाट दही, खाना, मासु पठाइदिन्थे, त्यो खाने गर्थे,’ स्रोतले भन्यो, ‘वरिपरि काँडेतार लगाएको र प्रहरी समेत खटिएका कारण उनीहरूमध्ये कोही पनि समुदायमा भने जान पाएनन् ।’
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतकी निर्देशक रिता भण्डारी जोशीले संक्रमितलाई दैलेख जिल्ला अस्पतालमा रहेको आइसोलेसनमा ल्याउने तयारी गरिएको बताइन् । ‘उहाँहरू महेन्द्रनगरबाट जेठ १ गते आउनुभएको हो । स्वास्थ्य अवस्था एकदम नर्मल छ । समस्या भएको खण्डमा दैलेख अस्पतालमा नै भेन्टिलेटर भएका कारण त्यहीँ राखिने छ ।’
क्वारेन्टाइनमा बसेका ३९ जनाको स्वाब जाँच गर्दा ती व्यक्तिमा मात्रै पोजेटिभ देखिएको थियो । ‘अब क्वारेन्टाइनमा बसेका अन्यलाई पुनः जाँच गर्ने वा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरू सिधै महेन्द्रनगरबाट बसमा आएका कारण समुदायमा त्रास मान्नुपर्ने अवस्था छैन । गाडीमा आएका अन्यको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौं ।’